1 Samuweli 14 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Samuweli 14:1-52
14 Kwathi ke ngamini ithile uYonatan+ unyana kaSawule wathi kumlindi owayethwele izixhobo zakhe: “Yiza siwelele enkampini yamaFilisti angaphesheya phaya.” Kodwa akazange amxelele uyise oko.+ 2 USawule yena wayehleli kummandla ongaphandle kweGibheya+ phantsi komthi werharnati oseMigron; yaye abantu ababekunye naye babemalunga namakhulu amathandathu amadoda.+ 3 (UAhiya unyana ka-Ahitubhi,+ umntakwabo Ikabhode,+ unyana kaFinehasi,+ unyana kaEli,+ umbingeleli kaYehova waseShilo,+ wayethwele iefodi.)+ Abantu bona babengazi ukuba uYonatan uhambile. 4 Ke kaloku phakathi kweengxingwa awayefuna ukuwela kuzo uYonatan aye kwinkampu+ yamaFilisti kwakukho ingxondorha efana nezinyo apha kweli cala nengxondorha efana nezinyo kwicala elingaphaya, yaye igama lenye yayiyiBhotsetse neleyenye iyiSene. 5 Elinye izinyo laliyintsika ngasemntla ekhangelene neMikimashe,+ nelinye lalingasemzantsi likhangelene neGebha.+ 6 Ngoko uYonatan wathi kumlindi, umphathi wezikrweqe zakhe: “Yiza size siwelele kwinkampu yala madoda angalukanga.+ Mhlawumbi uYehova uya kusisebenzela, kuba akukho sithintelo kuYehova ukuba asindise ngabaninzi okanye ngabambalwa.”+ 7 Umphathi wezikrweqe zakhe wathi kuye: “Yenza nakuphi na okusentliziyweni yakho. Yiya apho unqwenela ukuya khona. Yabona, ndinawe ngokuvisisana nentliziyo yakho.”+ 8 Wandula ke uYonatan wathi: “Yabona, siwelela kulaa madoda, masizibhence ke kuwo. 9 Ukuba angathetha ngale ndlela kuthi, ‘Yimani ngxi side sifike kuni!’ simele ke sime apho sikhoyo, singenyuki siye kuwo. 10 Kodwa ukuba angathetha ngale ndlela, ‘Nyukani nize kuthi!’ simele ke sinyuke, ngenxa yokuba ngokuqinisekileyo uYehova uya kuwanikela esandleni sethu, yaye lo ngumqondiso kuthi.”+ 11 Bazibhenca ke bobabini enkampini yamaFilisti. Aza amaFilisti athi: “Nanga amaHebhere ephuma emingxunyeni apho abezifihle khona.”+ 12 Ngoko amadoda asenkampini amphendula uYonatan nomphathi wezikrweqe zakhe aza athi: “Nyukani nize kuthi, kukho into esiza kunazisa yona!”+ Kwaoko uYonatan wathi kumphathi wezikrweqe zakhe: “Nyuka emva kwam, ngenxa yokuba ngokuqinisekileyo uYehova uya kuwanikela esandleni sikaSirayeli.”+ 13 Wenyuka ke uYonatan ekhasa ngezandla+ neenyawo, umphathi wezikrweqe zakhe esemva kwakhe; awa ke phambi koYonatan,+ nomphathi wezikrweqe zakhe esemva kwakhe ewabulala.+ 14 Yaye ukubulala ngogonyamelo kokuqala awaxabela ngako uYonatan nomphathi wezikrweqe zakhe kwaba ngamadoda amalunga namashumi amabini esiqingatheni sendima eyiakile yentsimi. 15 Kwandula ke kwabakho ukungcangcazela+ enkampini esendle naphakathi kwabo bonke abantu abasenkampini; nomkhosi wabaphangi+ wangcangcazela, wona kanye, nomhlaba waqala ukunyikima,+ yaba kukungcangcazela okuvela kuThixo.+ 16 Nabalindi bakaSawule ababeseGibheya+ yakwaBhenjamin bakubona oku, yaye, khangela! kwabakho ingxokozelo.+ 17 Waza uSawule wathi ebantwini ababenaye: “Khanibale, ncedani, nize nibone ukuba ngubani ophumileyo kuthi.” Xa babalayo, kaloku, khangela! uYonatan nomphathi wezikrweqe zakhe babengekho apho. 18 Ke kaloku uSawule wathi kuAhiya:+ “Sondeza apha ityeya kaTHIXO oyinyaniso!”+ (Kuba ngaloo mini ityeya kaTHIXO oyinyaniso yayiphakathi koonyana bakaSirayeli.)+ 19 Kwathi ke ngoxa uSawule wayethetha kumbingeleli,+ ingxokozelo eyayikwinkampu yamaFilisti yaya iqhubeka, ikhula ngokukhula. Wandula ke uSawule wathi kumbingeleli: “Buyisa isandla sakho.” 20 Ngaloo ndlela uSawule nabo bonke abantu ababenaye babizwa.+ Ngoko beza edabini, yaye apho ikrele lomnye lalinxamnye nedlelane lakhe;+ uphanziso lwalulukhulu kakhulu. 21 NamaHebhere awayephantsi kwamaFilisti+ ngaphambili nawayenyuke nawo ajikeleza inkampu, nawo kanye azingqina engakuSirayeli lo wayekunye noSawule noYonatan. 22 Nawo onke amadoda akwaSirayeli awayezifihle+ kummandla weentaba wakwaEfrayim eva ukuba amaFilisti asabile, aza awasukela athana mbende nawo edabini. 23 Ngaloo mini uYehova wamsindisa+ uSirayeli, nedabi ladlulela eBhete-aven.+ 24 Kwaye amadoda akwaSirayeli ayebandezelekile ngaloo mini, ukanti uSawule wabafungisa abantu,+ esithi: “Uqalekisiwe umntu odla isonka phambi kokuba kuhlwe ndide ndiziphindezelele+ ezintshabeni zam!” Yaye akukho namnye ebantwini owangcamla isonka.+ 25 Kwaye bonke abo belizwe beza emithini, xa kwakukho ubusi+ phezu komhlaba. 26 Xa abantu befika emithini, ewe, khangela! kwakuvuza ubusi,+ kodwa akukho bani wabeka isandla sakhe emlonyeni, ngenxa yokuba abantu babesoyika isifungo.+ 27 Ke yena uYonatan, wayengaphulaphulanga xa uyise wayefungisa abantu,+ ngoko wolula incam yentonga eyayisesandleni sakhe wayithi nkxu enqatheni lobusi waza wabuyisa isandla sakhe wasisa emlonyeni, aqala ke aqabuka amehlo akhe.+ 28 Omnye ke ebantwini wamphendula wathi: “Uyihlo ubafungise ngokunzulu abantu, esithi, ‘Uqalekisiwe umntu odla isonka namhlanje!’”+ (Nabantu baqala ukudinwa.)+ 29 Noko ke, uYonatan wathi: “Ubawo ulizisele ishwangusha+ ilizwe. Khanibone indlela aqabuke ngayo amehlo am ngenxa yokuba ndingcamle le ntwana incinane yobusi.+ 30 Kukangakanani ke ukuba abantu bebedlile+ namhlanje kwixhoba leentshaba zabo abazifumeneyo!+ Kuba ke ukubulala amaFilisti ngogonyamelo akubanga kukhulu.”+ 31 Yaye ngaloo mini bawaxabela amaFilisti ukusuka eMikimashe+ ukuya eAyalon,+ baza abantu badinwa kakhulu.+ 32 Abantu balitsibela ngokubawa ixhoba+ bathabatha izimvu neenkomo namathole eenkomo baza baxhelela emhlabeni, abantu badla negazi.+ 33 Ngoko bamxelela uSawule, besithi: “Khangela! Abantu bayona kuYehova ngokudla kunye negazi.”+ Wathi ke yena: “Niqhube ngobuqhophololo. Okokuqala nje, qengqelani kum ilitye elikhulu.” 34 Emva koko uSawule wathi: “Chithachithekani phakathi kwabantu, nize nithi kubo, ‘Sondezani kum, ngamnye wenu, inkunzi yakhe yenkomo, ngamnye, imvu yakhe, yaye nimele nixhelele kule ndawo nize nidle, ningoni kuYehova ngokudla kunye negazi.’”+ Ngako oko bonke abantu basondeza ngamnye inkunzi yakhe yenkomo eyayisesandleni sakhe ngobo busuku baza baxhelela apho. 35 USawule wamakhela isibingelelo+ uYehova. Waqala ngaso ukwakhela uYehova isibingelelo.+ 36 Kamva uSawule wathi: “Masihle emva kwamaFilisti ngobusuku size siwaphange kude kukhanye kusasa,+ masingashiyi namnye phakathi kwawo.”+ Bathi bona: “Nantoni na elungileyo emehlweni akho yenze.” Wandula ke umbingeleli wathi: “Masisondele apha kuTHIXO oyinyaniso.”+ 37 Waza uSawule wabuza kuThixo wathi: “Ndihle na emva kwamaFilisti?+ Uya kuwanikela na esandleni sikaSirayeli?”+ Yena ke akamphendulanga ngaloo mini.+ 38 Ngoko uSawule wathi: “Sondelani apha,+ nonke nina madoda aziintloko ebantwini,+ niqinisekise nize nibone ukuba esi sono senzeke ngayiphi na indlela namhlanje. 39 Kuba njengoko uYehova, onguMhlanguli kaSirayeli, ephila, kwanokuba sikuYonatan unyana wam, kanti uya kufa ngokuqinisekileyo.”+ Kodwa akukho bani wamphendulayo ebantwini bonke. 40 Waza wahlabela mgama wathi kuSirayeli wonke: “Nina niya kuba kwelinye icala, mna noYonatan unyana wam—siza kuba kwelinye eliya icala.” Bathi ke abantu kuSawule: “Yenza okulungileyo emehlweni akho.”+ 41 USawule ke wathi kuYehova: “Owu Thixo kaSirayeli, khawunikele iTumim!”+ Kwathatyathwa uSawule noYonatan, baza abantu bona baphuma.+ 42 USawule wathi ke ngoku: “Yenzani amaqashiso+ phakathi kwam noYonatan unyana wam.” Kwathatyathwa ke uYonatan. 43 Wandula ke wathi uSawule kuYonatan: “Ndixelele, Wenze ntoni na?”+ Ngoko uYonatan wamxelela wathi: “Enyanisweni ndingcamle nje intwana yobusi ngencam yentonga esesandleni sam.+ Ndim lo! Mandife ke!” 44 Wathi uSawule: “UThixo makenze ngaloo ndlela aze abe nokongezelela+ kuko ngaloo ndlela, ukuba akuthanga ngokuqinisekileyo wafa,+ Yonatan.” 45 Kodwa abantu bathi kuSawule: “Afe na uYonatan, owenze olu sindiso lukhulu+ kwaSirayeli? Makube lee oko!+ Ephila nje uYehova,+ akusayi kuwa nonwele olu lunye lwentloko+ yakhe emhlabeni; kuba ngale mini usebenzisene noThixo.”+ Baba ke abantu bayamkhulula+ uYonatan, akafa. 46 Ngoko wayeka uSawule ukuwalandela amaFilisti, namaFilisti aya endaweni yawo.+ 47 Wabuthabatha ke uSawule ubukumkani phezu koSirayeli+ waza walwa imfazwe nxamnye nazo zonke iintshaba zakhe ezazimjikelezile, nxamnye noMowabhi+ nanxamnye noonyana baka-Amon+ nanxamnye noEdom+ nanxamnye nookumkani baseTsobha+ nanxamnye namaFilisti;+ yaye naphi na apho wayejikela ngakhona wayedlulisela umgwebo wesohlwayo.+ 48 Kwaye waqhubeka esenza ngobukroti,+ wamxabela uAmaleki+ waza wamkhulula uSirayeli esandleni salowo wayemphanga. 49 Oonyana bakaSawule ke yayinguYonatan+ noIshvi noMaleki-shuwa,+ ke wona amagama eentombi zakhe ezimbini, igama laleyo yazalwa kuqala lalinguMerabhi+ negama lencinane linguMikali.+ 50 Igama lomfazi kaSawule yayinguAhinowam intombi ka-Ahimahatse, negama lentloko yomkhosi wakhe yayinguAbhinere+ unyana kaNere, uyisekazi kaSawule. 51 UKishe+ wayenguyise kaSawule, uNere+ uyise ka-Abhinere wayengunyana ka-Abhiyeli. 52 Nemfazwe ke yaqhubeka inzima nxamnye namaFilisti yonke imihla kaSawule.+ Xa uSawule ebone nayiphi na indoda enamandla okanye nawuphi na umntu olikroti, ubeyihlanganisela kuye.+
1 Samuweli 14